AVAMIN - JUNE
AVAMIN tables are scientifically formulated by combined Myanmar and German Biotechnology. AVAMIN can be taken safely by people of all ages and religions without any side effect. Each tablet contains Spirulina blue green algae and its extract fortified with minerals (natural zeolite) and vitamin C.
Spirulina blue green algae is harvested from Twyn Taung crater lake, Myanmar. It isanatural nutritional food supplement which can strengthen the immune system and is well know and consuming worldwide.
Spirulina is rich in plant protein (60%), with 18 amino acids, including 8 essential amino acids; gamma-linolenic essential fatty acid (Omega-6); vitamins: provitamin A (beta carotene), B-12 and E; chelated minerals: iron , calcium, magnesium, zinc and trace elements; plant pigments such as chlorophyll, carotenoids and phycocyanin.
Spirulina extract contains Calcium Spirulina (Ca-Sp) which is the active polysaccharide molecule with antiviral activity.
Myanmar Spirulina extract provides 80 to 100% protection level against Herpes simplex model virus and also 75% to 83% protection against influenza model virus (tested in Germany 2006 and 2010).
AVAMIN isa4 in 1 formula which can strengthen the immune system and gives antiviral health benefits with added minerals and vegetable nutritional supplements of natural Spirulina.
AVAMIN ဆေးတောင့်- ၆၀ တောင့် - ၆,၅၀၀/ ကျပ်
လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော အာဟာရပြည့်စုံစွာ ရရှိခြင်းအပြင် virus ရောဂါပိုးများ အလွယ်တကူ ကူးစက်ခြင်းမခံရအောင် ကာကွယ်ရာ၌ သင့်ခန္ဓာကိုယ် အတွက် အဓိက အရေးပါသော ခုခံစွမ်းအားစနစ် *IMMUNE SYSTEM* ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် အစွမ်းသတ္တိ ပါရှိသော Spirulina အဆီအနှစ်ကို SPIRULINA အမှုန့်၊ သတ္တုဓာတ်နှင့် ဗီတာမင်စီတို့ ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသည်မှာ AVAMIN SPIRULINA ဖြစ်ပါသည်။
* AVAMIN SPIRULINA သည် ဆယ်စုနှစ် တစ်စု သက်တမ်းရှိသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ဖြစ်ပါသည်။
* SPIRULINA ဆိုသည်မှာမှန်ဘီလူး(microscope)ဖြင့် ကြည့်မှသာ မြင်နိုင်သည့် စပလိန်ပုံရှိတဲ့ သေးငယ်သော ရေညှိ (Microalgae) ဖြစ်ပါသည်။ စူပါအစာ(SUPERFOOD) /ပြီးပြည့်စုံသော အာဟာရ(PERFECT FOOD) ဟူ၍လည်း လူအများ သိရှိထားကြပါသည်။
* SPIRULINA တွင် ပရိုတိန်း ၅၅ မှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ သက်သတ်လွတ် ဟင်းသီး ဟင်းရွက် အသားဓာတ်ပါဝင်ပြီး၊ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓါတ်၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ် အခြားဒြပ်စင်နှင့် လူကိုအကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေသည့် သဘာဝရောင်ချယ်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။
*** AVAMIN ရဲ့ ထူးခြားချက်မှာ Spirulina powder အပြင် Spirulina extract ထပ်ပေါင်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Spirulina powder ထက် ပိုမိုပါဝင်နှုန်းမြင့်ပြီး အာနိသင် ပိုမို ထက်မြက်ပါသည်။ virus ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်သော antiviral activity သည် စပီရူလိုင်းနား၏ အဆီအနှစ်တွင် ပိုမိုပါဝင်ကြောင်း ပညာရှင်များမှ ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ကျပါသည်။ ဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော ရောဂါအမျိုးမျိုး(တုပ်ကွေး ရောဂါများ အပါအဝင်) ဖြစ်ပွားခြင်းကို ကာကွယ်လျော့ကျစေပါသည်။ AVAMIN တွင် Vitamin C လည်း ပါဝင်ပါသည်။
* ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှ အဆိပ်အတောက်များကို ပြင်ပသို့ ရှင်းထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
*** AVAMIN တစ်ဘူးတွင်
1000 mg x 60 ပြား ပါပြီး 6000 ကျပ်(4500 ကျပ် April May လအတွင်း) ကျသင့်ပါသည်။ 1000 mg ဆေးပြားတစ်ပြားကို 100 ကျပ်ခန့် ကျသင့်ပါသည်။ တစ်နေ့ နှစ်ပြားသောက်ရမည်ဆိုပါက 200 ကျပ်ပဲ ကျသင့်ပါသည်။ သင်ရရှိမည့် ကျန်းမာရေး အကျိုး ကျေးဇူးများကတော့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ခုခံစွမ်းအားစနစ်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်းအပါအဝင် အာဟာရ ပြည့်စုံစွာ ရရှိခြင်း၊ နေလို့ထိုင်လို့ ကောင်းခြင်း(WELLBEING) စတဲ့ အကျိုးတွေ ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
* virus ရောဂါကို ကူးစက်ခြင်းမခံရအောင် ကာကွယ်ရာတွင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အာဟာရပြည့်စုံစွာ ရရှိခြင်းအပြင် အဓိကအားဖြင့် ခုခံစွမ်းအားစနစ် ဟုခေါ်သော ***IMMUNE SYSTEM*** မြင့်နေဖို့ လိုအပ်ပါသသည်။ ခုခံစွမ်းအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် အစွမ်းသတ္တိရှိသော Spirulina အဆီအနှစ်ကို AVAMIN ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုထားပါသည်။
* AVAMIN ကို တစ်နေ့လျှင်
- 120 lb အောက် တစ်နေ့ ၂ လုံး
- 120 မှ 150 lb ကြား တစ်နေ့ ၂ လုံး မှ ၃ လုံး
- 150 အထက် တစ်နေ့ ၃ လုံးမှ ၄ လုံး သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ မိမိနှင့် သင့်တော်သော နေထိုင်၍ ကောင်းသည့် အနေအထားကို မိမိကိုယ်တိုင် ချိန်ညှိပါ။
* မနက် ည ( ၂ ) ကြိမ် ခွဲ မသောက်နိုင်ပါက တစ်ကြိမ်ပေါင်းသောက်နိုင်ပါသည်။ SUPERFOOD သည် အစာတစ်မျိုးပင် ဖြစ်သောကြောင့် ကြိုက်နှစ်သက်သောအချိန်တွင် သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
* သင့်ခန္ဓာကိုယ် ခုခံစွမ်းအားစနစ် မြင့်နေဖို့ ခုချိန်မှာ ဘယ်လောက် အရေးကြီးလဲဆိုတာ သင်သိနေပြီမို့ JUNE SPIRULINA က ထုတ်တဲ့ AVAMIN (အားဗားမင်း) စပီရူလိုင်းနား အစိမ်းရောင်ဘူးကို သောက်သုံးသင့်ပါတယ် လို့ အကြံပြုလိုပါသည်။
"လူတိုင်း လူတိုင်း ကျန်းမာဖို့
AVAMIN ကို သောက်ကြစို့"
*** သင်နှင့် သင်ချစ်သောသူများ ကျန်းမာစေဖို့ ***